Raayyaan humna ittisa Itoophiyaa daangaa Keeniyaa cabsee seenuudhaan waajjira poolisii qabate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Raayyaan humna ittisa Itoophiyaa daangaa Keeniyaa cabsee seenuudhaan waajjira poolisii qabate
Raayyaan humna ittisa Itoophiyaa daangaa Keeniyaa cabsee seenuudhaan waajjira poolisii North Horr aanaa Marsabeet keessatti argamu tokko too’ate. Kuni kan ta’e hayyama mootummaa Keeniyaatiin alatti. Woraanni kuni konkolaataa kudhanitti kan fe’ameefi AK-47 (Kilaashii) kan hidhate ta’uunis beekameera. Humni woraana kanaa waajjira dhuunfachuun alatti suuraa naannoo saniis kaasa turuun isaa gabaafameera.
Waajjirri poolisii North Horr yeroodhaaf harka raayyaa woraana Itoophiyaatti kufe daangaa Itoophiyaa irraa km 16 fagaateeti kan argamu.
Itoophiyaa humna woraana isii garasitti akka ergituuf maaltu akka isii dirqe wonti gama Itoophiyaatii hafuursame tokko hinjiru. Gama mootummaa Keeniyaatiin wonti ifa godhame hanga ammaatti hinjiru.
‘Maal akka barbaadan hinbeeknu,’ jedha ibsi angawaan poolisii biyyattii tokko baase. Ta’us, daangaa cabsuun woraana Itoophiyaa kuni kan dhufe torbee tokko booda erga qorattoonni lafaa hojii daangaa Keeniyaafi Itoophiyaa dangessuu xumuran boda. Wolitti hidhata qabaachuus dhabuus nimala.
Dubbi-himaan humna woraana Keeniyaa, koloneel Deviid Obonyoo, ‘humni woraana Itoophiyaa daangaa cabsuu isaaf odeeffannoo hinqabnu. Itoophiyaan michuu teenya waan taateef waan gadhee nihojjatan jennee hineegnu,’ jedhe.
Huni kuni gara Itoophiyaatti kan deebi’u ta’uu isaa miseensonni raayyaa humna ittisa Itoophiyaa daangaa cabsan kunniin jiraattota naannoo saniitti himaniiru.
Bara 2015 keessa qofa huni ittisa Itoophiyaa daangaa Keeniyaa cabsee kan seene yeroo 3ffaaf.
daangaa itoophiyaafi keeniyaa
Previous articleThe danger of land price bubble in Ethiopia
Next articleAwol Allo: Washington enables authoritarianism in Ethiopia